Diego Costa oo weerar culus ku qaaday macalinkiisii hore kooxda Chelsea Antonio Conte – Gool FM
(Atletico) 28 Sab 2018. Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Diego Costa ayaa weerar culus ku qaaday macalinkiisii hore kooxda Chelsea Antonio Conte, sababa la xiriira kasoo tagista garoonka Stamford Bridge.
Hadalka Diego Costa ayaa wuxuu imaanayaa kadib wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain kahor kulanka Madrid derby ay Sabtida booqan doonaan garoonka Santiago Bernabeu.
“Wuxuu ahaa waqtigeygii ugu xumaa, laakiin ma uusan ahayn qaladkeyga, dadku waxay sheegeen waxyaabo badan, laakiin waqtiga xili kasta meel walba ayuu ku dhigayaa, fiiri halka uu haatan Conte joogo
“Waxaan kaga soo dhaqaaqay kooxda Chelsea qaab xun sababa la xiriira isaga daraadiis, waan guuleesanay, hadana sidaasoo ay tahay Conte wuxuu ii soo diray fariin uu iigu sheegayo inuusan u baahneen adeegeyga”.
“Waxaan helay fursad aan dib ugu laaban karay kooxda Atletico Madrid, mana jirin wax qabad ah ee I hor taaganeed, waxaana si weyn u doonayay dib ugu laabashada dalka Spain”.
“Kadib markii ay Chelsea igu war galisay inaan dib ugu soo laabto tababarka kooxda, waxaan ka door biday inaan qoyskeyga waqti kula qaato dalka Brazil, halka aan dib markale ugu soo laaban Stamford Bridge”.
Unai Emery oo ka warbixiyay sababaha loo xayiray heshiis kordhinta Aaron Ramsey